Nwere ike ịda mba nwere ike ime ka ị maa abụba? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Abụba obi mgbawa - otu esi edozi
Abụba obi mgbawa - otu esi edozi
Nwere ike ịda mba nwere ike ime ka ị maa abụba?
Ndị mmadụ naịda mbama ọ bụ nchegbu nwere ike ịnwe uru ma ọ bụ ọnwụ dị arọ n'ihi ọnọdụ ha ma ọ bụ ọgwụ ndị na-agwọ ha.Nsogbuna nchegbunwere ikeha abụọ metụtara iri oke nri, nhọrọ nri na-adịghị mma, na ibi ndụ ịda mba. Ka oge na-aga, iburu ibu nwere ike mechaa buru oke ibu.
Gịnị Mere I Ji Enwe Ibu Ibu Iji Mwepụ Uche na Mkpụrụ Obi? Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu taa. Abụ m Dr Tracey Marks, onye na-agwọ ọrịa uche. M na-eme akwụkwọ gbasara ahụike ọgụgụ isi.
Isiokwu nke taa gbadoro ụkwụ n'ọtụtụ ajụjụ ndị na-ekiri ya ka m wee nwee ike ikwu maka ya, azịza ya bụ na anyị amaghị usoro zuru ezu. Mana lee uzo abuo ndi aturu aro banyere ogwu ogwu na ogwu ndi ozo, nke anyi ji eme ka obi di ike, na eme ka ibu buru ibu. Aga m ekwu maka ihe anyị na-eme maka ya.
Drugszọ ọgwụ ndị a si ebute uru ibu site na igbochi ndị nabatara histamine 1. Anyị na-echekarị histamine dị ka ihe metụtara allergies na mmeghachi omume gị. Ọ bụrụ na ekpughere gị ihe ọ bụla n'ahụ gị na-emetụta, ị ga-enweta mmeghachi omume nke histamine nke dịka itching, imi na-agba ọsọ, ma ọ bụ ọbụna ume iku ume.
Ma mgbe ahụ ị nwere ike were antihistamine dị ka Benadryl, ọ ga-akwụsịlata mmeghachi omume nfụkasị ahụ iji mee ka ahụ dị gị mma. Otú ọ dị, nke a bụ otú o si arụ ọrụ site n'olu gbadaa. Histamine na-arụ ọrụ dị iche na ụbụrụ gị; n'akụkụ ụfọdụ nke ụbụrụ gị, ọ bụ maka ịmụrụ anya ma ọ bụ ikike ịmụrụ anya.
Nke a bụ ihe kpatara ị takingụ ọgwụ antihistamine nwere ike belata mmeghachi omume nfụkasị gị, mana mgbe ọ gafere mgbochi ụbụrụ ọbara ọ nwekwara ike ime ka ụra buru gị n'ihi na ọ na-egbochi mmetụta na-akpali akpali nke histamine na ụbụrụ gị. Enwere ndị na-anabata histamine anọ, m ga-ekwu maka ndị natara H1. Na ụbụrụ gị, ndị nnata H1 na-eme ọtụtụ ihe.
Ha na-etinye aka na ụra ụra, ụra ahụ na usoro endocrine, mgbu, cognition na nke dị mkpa ebe a: agụụ. Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala na igbochi ndị na-anabata H1 na-emetụta mpaghara dị n'ụbụrụ gị nke na-eme ka afọ ju gị. A na-akpọ ya satiety center.
Anyị na-ahụ nke a na ọgwụ ụfọdụ dị ka paroxetine, quetiapine, na olanzapine; ọgwụ ndị a na-enye gị agụụ. Ndị mmadụ nwere ike ịnweta agụụ carbohydrate dị egwu na ụfọdụ ọgwụ ndị a. Mana ezughị iji kwuo na ị naghị eribiga nri ókè.
Mgbe afọ juru m, elekwala nri gị anya. Na-eri n’ihi na agụụ ka na-agụ gị. Ọ naghị adị gị ka afọ juru gị.
Nke a na - eme na obere oge. Ma site na ụfọdụ n'ime ọgwụ ndị a, enwere mmetụta na-aga ogologo oge nke ga-eme ka ị buru ibu. Obere ngwa ngwa a na-enweta oge na-abịa site na mmetụta ọzọ nke igbochi ndị natara H1, mmetụta a na-agbagha usoro a na-akpọ thermogenesis.
Thermogenesis bụ usoro nke imepụta okpomọkụ ma na-ewepụta ike site na abụba na calorie na-ere ọkụ. Mgbe ị na-ere obere abụba, ọ na-abawanye. Ọtụtụ abụba ị nwere, nke dị elu karịa ahụ gị, nke a makwaara dị ka BMI.
Ma nke ahụ bụ abụba ahụ gị iji dabere akwara uru. Ya mere, nke a bụ ihe mgbochi histamine. Ihe ojoo.
Usoro nke abụọ na-egbochi ndị nabatara 5HT2c. Nke a bụ naanị otu ụdị ihe na-anabata serotonin. E gosiputara na ụmụ oke na mgbe ị na-arụ ọrụ ndị na-anabata 5HT2c ha, ha na-efunahụ ha n'ihi na ha erighị obere igbochi onye nnata ahụ, ha buru oke ibu.
Ọtụtụ n'ime ọgwụ ọgwụ mgbochi ọhụụ na-egbochi onye nnabata a. N'ime ọgwụ antipsychotic niile, ndị kachasị njọ ma a bịa n'ịba ụba bụ olanzapine, clozapine, na quetiapine. Na ọgwụ atọ ndị a na-egbochi 5HT2c.
Fọdụ n'ime ọgwụ ndị na-eme ka ọgwụ serotonin na-ebuwanye ibu karịa ndị ọzọ. Paroxetine na mirtazapine bụ ndị ọkụ siri ike n'ihi na ha na-egbochi ndị na-anabata histamine ike. Ọtụtụ n'ime ọgwụ ndị a na-ahụta dị ka ndị na-anọpụ iche nwere ike ịbute kilogram abụọ ma ọ bụ okpukpu anọ dị arọ, 50-60 ma ọ bụ ọbụlagodi paụnd 70.
Nnyocha nyocha dị ka nke m nwere na nkọwa ahụ anaghị ekwupụta uru a. Nwere ike dee ya dị ka kilogram ise na isii. Mana ndị a dabere na ọmụmụ izu 12. Izu 12 anaghị ekwe ka mmetụta na-akpụ akpụ ị nwere ike inweta na mmetụta dị ogologo oge nke igbochi histamine.
Yabụ nke ahụ bụ nsogbu, gịnị ka anyị ga-eme maka ya? s? Approachzọ na-enweghị ọgwụ bụ ịgbaso nri siri ike ma na-emega ahụ ike. Omume ahụ siri ike bụ iji merie usoro ọkụ ọkụ na-adịghị ala ala nke m na-ekwu banyere nrụrụ na-adịghị mma. Anyị na-ekwu okwu banyere ọzụzụ ahụike.
Nke a abụghị naanị ịgagharị nkịta gị; nke a ka bụ nnukwu mmega ahụ, mana ezughi oke iji gbochie paụnd ahụ. N'ịgbalị ịkwakọba ụba nke abụba, ịkwesịrị ịzụlite akwara nke ga-agba abụba ahụ ọkụ. Nke a ga - esite na ibu ibu.
Kwesighi ịga mgbatị ahụ n'ụzọ nkịtị. Nwere ike iji nguzogide nke ahụ gị. Enwere ngwa dị n’ebe ahụ nwere ike inyere gị aka mepụta mgbatị nke gị.
Ihe atụ ụfọdụ bụ Zova na Sworkit. Nhọrọ ọgwụ ga-agbakwunye ma ọ bụrụ na ịnwere ike ijikwa ọgwụ a. Enwere ike inwe ihe kpatara na ị nweghị ike ibute buproprion, dị ka: B. ọ bụrụ na ịnwee ma ọ bụ nwalee ọrịa bipolar 1 ma nwee mmetụta dị iche iche.
Buproprion anaghị ebute uru ibu ma ụfọdụ mmadụ nwere ike tufuo ya. Contrave bụ FDA kwadoro m maka ngosipụta ọnwụ. Ọ bụ nchikota nke buproprion na naltrexone.
Ọ malitere na 2014, mana ụlọ ọrụ ahụ gbara akwụkwọ maka enweghị ego na 2018. Ya mere ejighi m n'aka ihe ga - eme nnweta ọgwụ a. Ọrịa ọzọ na-ebu ọnwụ bụ orlistat.
Ọ na-ebelata abụba abụba. Onu ogugu onu ogugu n'ule ogwu bu ihe dika 10% nke aru gi. Nke a nwere ike ọ gaghị adị gị oke mkpa dabere na ego ị nwetara.
Ọ bụrụ na i nweela pound 40 ma ugbu a ruo 200 nke ahụ pụtara na ị nwere ike tufuo 20 naanị pound ndị ahụ. Nke a bụ uru dị mma, mana ịkwesịrị ịlele mmetụta ndị dị n'akụkụ iji hụ ma ọ bara uru ị takingụ ọgwụ ahụ maka gị. Isi mmetụta dị na ya bụ stool na-asọ mmiri na afọ ọsịsa.
Ikpoko osisi na-abụkarị nke nnukwu, nke chachara acha na agba, ma na-esi ezigbo isi, yana ihe nkiri na-ete mmanụ n’elu. Na stools na abụba anaghị agbapụ nke ọma. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọghị ịkpasu ndị ezinụlọ gị iwe, ikekwe ị ga-achọ ụlọ ịsa ahụ nke gị.
Peoplefọdụ ndị jụrụ nhọrọ a. Nhọrọ abụọ ọzọ bụ Metform, ọgwụ na-arịa ọrịa shuga. Ga-anara ya ọbụlagodi na ịnweghị ọrịa shuga.
Ga - ewere ya naanị maka ọnwụ ọnwụ. Ma e nwere topirimate. Nke a bụ ọgwụ eji eme ihe na mpụga, ọ na - enyere gị aka ịkwụsị ibu site na mbenata agụụ gị.
sọks ịgba ígwè
Mana o nwere ike inwe mmetụta ọgụgụ isi dị ukwuu, dị ka mgbagwoju anya na nsogbu ncheta. Cheta na oria gi nwekwara ike buru oke ibu n’onwe ya. Da mbà n’obi nwere ike ime ka ị ghara ịna-arụ ọrụ nke ọma.
Tụlee nhọrọ a tupu ịkwụsị ma ọ bụ gbanwee ọgwụ gị n'ihi na ọ nwere ike ime ka ị chee na ọ ga-eme ka ị buru ibu. Ọ bụ ya. Daalụ maka ikiri.
Obi ịda mba ọ na-ebute abụba afọ?
E nwere ọtụtụ ụzọịda mbanwere ike ịbawanyeafọ abụba, ndị nnyocha ahụ kwuru. Oge nchegbu naịda mbanwere ike ime ka ụfọdụ ụbụrụ rụọ ọrụ, na-ebute ụba nke hormone cortisol, nke na-akwalite nchịkọta visceralabụba.Dec. 3 2008
Anụ ahụ dị ala nwere ike ibute ịda mba?
Nchoputa anyi choputara na ha abuoabụbaukanaịdị elu (mkpụmkpụ) bụ ihe kpatara nsogbuịda mba, ma nonfat abụghị. Nsonaazụ ndị a na-anọchi anya ihe ọmụma ọhụụ dị mkpa banyere ọrụ anthropometric na etiology nkeịda mba.Ọgọst 5 2019
N'isiokwu a, m ga-ekwu maka testosterone na ọrụ ya na ịda mba na ụmụ nwoke. Abụ m Dr Tracey Marks, Ọkachamara, na ọwa a gbasara agụmakwụkwọ ọgụgụ isi na mmelite nke onwe. Ana m etinye edemede kwa izu.
Y’oburu n’icho onye, ​​pia ‘Subscribe’. Ọrịa testosterone bụ ihe na-akpatakarị ịda mbà n'obi na ụmụ nwoke ma nwee ike ịchọta ya. Dịka onye isi mgbaka, ana m ahụ ma nwoke dara mbà n'obi nke anaghị eme nke ọma na antidepressants, ma ọ bụ nwoke na-anaghị enwe oke mwute, mana kama iwe, iwe, nchekasị, ma ọ bụ ọbụlagodi adịghị mma.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ịrịba ama ndị ọzọ na mgbaàmà nke erughị testosterone. M ga-edepụta naanị ole na ole ebe a, mana ndepụta zuru ezu dị na nkọwa ahụ. May nwere ike ịnwe ntachi obi, belata nha afụ ọnụ, iwelata ma ọ bụ ihicha anụ ahụ, ọrụ mmekọahụ na-adịghị mma dị ka obere ọchịchọ ma ọ bụ nsogbu erectile, belata ike izugbe ma ọ bụ nguzogide, obere anaemia, octor uru bara uru maka nyocha na ọgwụgwọ.
Iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị naghị enwe testosterone, dọkịta gị ga-atụle ụkpụrụ ọbara gị. Nnyocha bara uru bụ iji tụọ ngụkọta ọgwụgwọ testosterone dum tupu elekere 9 nke ụtụtụ.
Ihe kpatara ụtụtụ ụtụtụ bụ n'ihi na testosterone gị na-arị elu na ala n'ụbọchị, na ọkwa kachasị elu na-adịkarị n'etiti 7 na 8 elekere na nke kachasị dị ala n'etiti 7 na 8 elekere.
Ihe na-akpata nsogbu a nwere ike ị na-eche. Ọfọn, testosterone na-amalite ịda ada mgbe ọ dị afọ 30, mana ọ na-abụkarị nwayọ nwayọ, yabụ site na afọ 60, ihe dịka 30% nke ụmụ nwoke nwere obere testosterone. Enwere ọtụtụ ihe ejikọtara na testosterone dị ala.
protein na akwa ọcha ma ọ bụ yolks
Ha anaghị akpata ya, mana anyị ahụla njikọ. Ihe ndị a na-agwọ ọrịa shuga, oke ibu, isi ọwụwa na-adịghị ala ala, ihe karịrị afọ 60, na-agwọ ụkwara ume ọkụ, na ihi ụra na-erughị awa ise kwa abalị. E nwekwara ụfọdụ ọgwụ nwere ike ibute ogo testosterone dị ala.
Cholesterol na-agbadata ọgwụ ndị dị ka Lipitor, hụrụ palmetto, ọgwụ na-ebubata ọgwụ na-agwọ ọrịa prostate buru ibu, nke a na-akpọ hypertrophy prostatic ma ọ bụ BPH nke nwere ike ibute ogo testosterone dị ala, ọtụtụ n'ime ha, yana ụkọ zinc. Ọ bụrụ na ị na-ewere antipsychotic dị ka risperidone, ọgwụ a nwere ike ibute ogo prolactin. Prolactin bụ homonụ nke emepụtara na pituitary gland gị na ụbụrụ gị, ogo ogo prolactin nwere ike belata testosterone ma mee ka ara ara.
Nke a abụghị naanị abụba dị n’obi gị. Nwere ike ịnwe anụ ahụ ara na ọbụna ịnwe obere mmiri ara ehi emepụtara, ọ bụghị mgbe niile, mana oge ụfọdụ ọ bụrụ na nsogbu ahụ metụtara ọgwụ, ị nwere ike ịkwụsị ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike. Ikwesiri ịjụ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọ bụ ọgwụ ndenye ọgwụ na ya nwere ike - ha nwere n'ezie onye ọzọ maka ị ga-ewere kama.
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi enweghị zinc, ịnwere ike ịgbakwunye zinc. Otú ọ dị, ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ n'ihi na testicles gị anaghị eme testosterone zuru ezu, a na-akpọkwa nsogbu a hypogonadism, mgbe ahụ ọgwụgwọ bụ mgbakwunye testosterone. Mgbakwunye nwere ike ịbịa n'ụdị mgbochi, pill, gel, ma ọ bụ ọbụna ogwu ogbugba.
Ọ bụrụ na ị na-eme Ọ bụrụ na ị na-agbakwunye na testosterone ma ọ na-eweta ọkwa gị na etiti etiti, ị nwere ike ịhụ ndozi nke ịda mbà na nchekasị gị n'ime izu anọ. (Cheers) Nke ahụ bụ nzaghachi ngwa ngwa, ọ naghị eme n'otu ntabi anya, mana n'ihe banyere ya Ogologo oge ole ọ ga - ewe iji meziwanye n'ozuzu ya, nke ahụ bụ nzaghachi ngwa ngwa mara mma, mana ọ ga - ewe obere oge maka ọkwa gị ịga Dabere na etu ị siri bido na ụdị ọgwụ ị na-a .ụ. Ọgwụ ga-arụ ọrụ ngwa ngwa, mana ọ bụghị nke ahụ adaba. (Cackle) Ozugbo ị mezigharịrị ụkpụrụ gị, ị ga-ahụ nnukwu mmetụ nke mmetụta gị, gụnyere mmụba nke ùgwù onwe gị.
Lowfọdụ ụmụ nwoke testosterone dị ala nwere ike ịkpọ onwe ha asị ma sie ike na onwe ha. Enwere m olileanya na nke a na-enyere aka. Hụ nkọwa maka ihe ịrịba ama zuru ezu na mgbaàmà nke ụkọ testosterone.
Ọ bụrụ na ị maara onye nwere ike iji ozi a ma nyere ha aka, kekọrịta edemede a. Ma n'ezie, na-amasị ya ma ọ bụrụ na-amasị gị. Abụ m ihe m bụ taa ♪♪ Maka na emeela m ihe a ♪♪ Ọ dịghị ihe unu niile na-ekwu ♪♪ N'ime ụwa a ma ọ bụ ọzọ ♪
Nrụgide na ịda mbà n'obi ọ na-ebute ibu ibu?
“Ma anyịmeemara nke ahụịda mbanwere ọtụtụ mgbaàmà nanwere ikenjọ ibu - nsogbu aghara, enweghị ike, enweghị mkpalimeeihe. ” Na 2009, ndị nchọpụta na Mahadum Alabama dị na Birmingham kwuru nadara mbà n'obindị mmadụ na-achọkarịnweta ibungwa ngwa karịa ndị na-abụghịdara mbà n'obi.Sep 3 2010
Enwe obi ụtọ nwere ike ibute ọnwụ?
Ike nile nkenrụgidenwere ike ịhapụ ka ị ghara ichewe gbasara ihe ọ bụla. Nke a nwere ike imetụta otú i si eri nri. Agaghị agụ gị agụụ ma ọ bụ chefuo iri nri ọnụ oge ị na-enwe nsogbunrụgide, na-eduga naọnwụ ọnwụ.07.31.2018
Kedu ka ị ga - esi mara ma abụba abụba?
Emere nọmba BMI iji nyeị bụechiche nke aruabụba gịnwere dị ka a ruru nkenke giibu ka elu. Ọ na-tụrụ site na-ewerenke giibu ibu na kilogram ma na-ekewa ya sitenke giịdị elu na mita anọ. Gụ ihe ma ọ bụ karịa 30 pụtaragị'reobesi oke. Gụ ihe na 40 ma ọ bụ karịa bụ oke ibu.
Gini mere anaghị m adalata?
Ebe ahụdịụfọdụ ọnọdụ ahụike nanwere ikeụgbọalaibu ibuenweta ma mee ka ọ sie ike karịhapụ ibu ibu. Ndị a gụnyere hypothyroidism, polycystic ovarian syndrome (PCOS), na ụra ụra. Medicationsfọdụ ọgwụnwere ikemekwaaibu ibuọnwụ siri ike - ma ọ bụ kpatara yaibu ibunweta.
Anxiety nwere ike ịkwụsị ibu na ụjọ na ịda mba?
Da mbà n’obi nwere ikena-emekwa ka mbelata nke agụụ na-emecha duga n’amaghị amaọnwụ ọnwụ. Fọdụ ndị mmadụ nwere ike ịtụle nke a dị mma, ma na mberede ma ọ bụ okeọnwụ ọnwụ nwere iketinye ahụike gị n’ihe egwu.02.26.2021
Enwere abụba 0 enwere ike?
Requiremụ nwoke chọrọ opekata mpe 3abụba ahụna ụmụ nwanyị ma ọ dịkarịa ala pasent 12 iji nwetaahụịrụ ọrụ nke ọma, Garber kwuru. N'okpuru ebe a ka ị ga - amalite ịhụ nnukwu nsogbu ahụike. “Ahụtụbeghị m onye ọ bụla nwere efu n'ezieabụba ahụ, ”Ka o kwuru. “Just nweghị ike ịnọ.Mar 25 2015
Kedu ihe bụ abụba anụ?
'Skinny abụba”Bụ okwu na-ezo aka n’inwe ọdịdị dị elu nke anụ ahụabụbana obere akwara, n'agbanyeghị inwe BMI 'nkịtị'. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ịrịa ọrịa shuga na ọrịa obi.June 8. 2021 g.
Kedu ka abụba anụ ahụ si emetụta ihe ize ndụ nke ịda mbà n'obi?
Nsonaazụ ndị a na-anọchi anya ihe ọmụma ọhụụ dị mkpa banyere ọrụ anthropometric na etiology nke ịda mba. Ha na-atụkwa aro na mbenata oke abụba ga-ebelata ihe egwu nke ịda mba, nke na-enyekwu nkwado maka usoro ahụike ọha na eze iji belata ọrịa oke ibu.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere nkụda mmụọ ma nwee abụba afọ?
Abụba afọ bụ ihe egwu maka ụdị ọrịa shuga 2, ọrịa obi, na ọbara mgbali elu. N’ezie, ịda mba n’obi na-ebute ihe ndị na-akpata ya, gụnyere igbu onwe onye, ​​ikewapụ onwe ya iche, ị drugụ ọgwụ ọjọọ na ị alcoholụbiga mmanya ókè, na nchekasị. Kedu nke buru ụzọ - ịda mba ma ọ bụ oke ibu / ibu - ọ bụ njikọta adịghị mma.
Kedu njikọ njikọta nke anụ ahụ na ịda mbà n'obi?
Imirikiti ọmụmụ banyere mkpakọrịta oke ibu-ịda mba na-eji usoro ọnụọgụ anụ ahụ eme ihe dị ka oke ibu. A na-akọwapụta ọnụọgụ ahụ dị ka ịdị arọ (nke a tụrụ na kilogram) kewara site na square nke ịdị elu (mita) yabụ anaghị ama ọdịiche dị n'etiti onyinye nke abụba na abụba na-ebu ahụ.